သင့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာရှမ်းကျောင်းသားများသှနျသငျဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello
ရှမ်း (မြန်မာပြည်) ရှမ်းပြည်နယ်မှသင်၏ကျောင်းသားများကိုနားလည်ခြင်း (မြန်မာပြည်) နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ
Flickr ကိုအပေါ် Tian Yake နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
မြန်မာပြည် (မြန်မာ) ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေသည်, 1950 ကတည်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖိနှိပ်မှုနှင့်တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခ. မြန်မာနိုင်ငံကျော်ပါဝင်သည် 100 ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအုပ်စုများ, ရှမ်းအပါအဝင်. ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေနှင့်အတူ6သန်း, ရှမ်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအဓိကအားဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်, မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်, တိုင်းပြည်၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်. မြန်မာအစိုးရနှင့်ပဋိပက္ခများကိုစဉ်အတွင်း, အများအပြားရှမ်းကျေးရွာများပျက်စီးခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့မြို့သားတို့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းသို့မဟုတ်ထိုင်းသို့ပြေးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ. ကရင်သို့မဟုတ်ကရင်နီမတူဘဲ, သို့သော်, သူတို့ကထိုင်းအာဏာပိုင်များအားဖြင့်ဒုက္ခသည်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်မဟုတ်, တရားမဝင်သို့မဟုတ်အထောက်အထားမဲ့အလုပ်သမားအဖြစ်နှင့်အစားအများအပြားအလုပ်. ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိပါတယ် 100,000 စခန်းများတွင်မဟုတ်သောနယ်စပ်ဒေသများတွင်ရှမ်းဒုက္ခသည်များ. ရှမ်းဒုက္ခသည်တွေသာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖွင့်ပါစေ 2% နယ်စပ်တလျှောက်တွင်စုစုပေါင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောဒုက္ခသည်. မတည်ရှိပါဘူးကွောငျးတစျခုရှမ်းဒုက္ခသည်စခန်းဟာအလွန်ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသအတွက်ဖြစ်ပါသည်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ဒုက္ခသည်များအတွက်အခြားစခန်းများထက်လျော့နည်းနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးရှိခဲ့ပါတယ်. ရှမ်းအလွန်သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတက်အောင် (ထက်ငယ်သော 10%) US မှာအခြေချမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်စုစုပေါင်းဒုက္ခသည်.
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းပညာရေးကန့်သတ်. ကျောင်းများအောက်တွင်-အရင်းအမြစ်နှင့်မလုံလောက်ပါဆရာ, ဆရာမအဲဒီမှာမဟုတ်. Young ကယောက်ျားလေးများဘုန်းတော်ကြီးသင်ကျောင်းတက်စေခြင်းငှါ. အများစုမှာကျောင်းသားများကသူတို့အရေးကြီးသောနှင့်တန်ဖိုးရှိသောအဖြစ်ကျောင်းကိုကြည့်ရှုဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကနောက်ထပ်ပညာရေးအတွက်န့်အသတ်အခွင့်အလမ်းများရှိနားလည်သဘောပေါက်သတင်းပို့. ခေတ်သစ်ရှမ်းမိဘများမကြာခဏနိုင်ငံရေးကြေညာချက်နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုဖို့ကတိကဝတ်အဖြစ်၎င်းတို့၏မိခင်ဘာသာစကားမှာဖတ်နဲ့ရေးသားဖို့သူတို့ကလေးတွေကိုသင်ပေးဖို့ကြိုးစား.
အတော်များများကရှမ်းဒုက္ခသည်တွေထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်. တစ်ဦးကအလွန်သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဒုက္ခသည်စခန်းကျောင်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးဖွယ်ရှိသူတို့ဖြစ်စေထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေ့ပြောင်းကျောင်းများသို့တက်ရောက်သို့မဟုတ်ကျောင်းမတက်ခဲ့ပါ. မူရင်းထိုင်းအစိုးရမူဝါဒကတကယ်တော့စခန်းများရှိဆရာ, ဆရာမအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှအနောက်နိုင်ငံတားဆီး, ဒါပေမယ့်အစားသာဆရာ, ဆရာမမှအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အစေခံရန်. ကျောင်းများ Semi-အမြဲတမ်းအဆောက်အဦးများအတွက်တက်ရောက်ရန်စခန်းတက်ရောက်ရန်လုပ်ပေးသူကိုကျောင်းသားများ. ကျောင်းသားများကနိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်တန်ဖိုးများဆံ့ကြောင်းပစ္စည်းများလေ့လာခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်. အဘယ်သူမျှမစားပွဲပုံမှန်အားဖြင့်ရှိပါတယ်, ကုလားထိုင်သို့မဟုတ်ဖတ်စာအုပ်များ.
ရှမ်းမိတ်ဆွေများကိုခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အသုံးပြုကြသည်ဒါကြောင့်အခြားမိဘများထက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုလွယ်အုပ်စုသည်ဖြစ်နိုင်သည်. ရှမ်းပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးယဉ်ကျေးလိပ်စာသုံးပြီးအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မိတ်ဆက်, မကြာခဏ "စိုင်း"လူအဘို့နှင့်"ရသောအခါ"မိန်းမတို့အဘို့.
ရှမ်းယဉ်ကျေးမှုကိုအများကြီးရိုးရာရှိပါတယ်: အချို့ကလေးငယ်များပါဝင်နှင့်အချို့သောလုလင်အုပ်စုများပါဝင်ပတ်သက်နေ. နောက်ပိုင်းကျောင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းနာရီအတွင်းကဤခုန်သင်ပေးဖို့မိဘများဖိတ်ခေါ်ရှမ်းမိသားစုများကျောင်းအသိုင်းအဝုိင်းမှချိတ်ဆက်ခံစားရကူညီစေခြင်းငှါ. Music ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနှငျ့ရှမျးမိသားစုများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အခြားဧရိယာဖြစ်နိုင်သည်, ဗုံ play ဖို့ဘယ်လိုသိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်, Gong နှင့် / သို့မဟုတ်ဝါးပုလွေ.
အားကစားရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိလူတို့သညျအဘို့အလွန်လူကြိုက်များ, စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာအပါအဝင်နှင့် takraw, hacky အိတ်ဘဲပိုကြီးတဲ့ဘောလုံးကိုနှင့်အတူဆင်တူတဲ့ဘောလုံးကိုဂိမ်း. ဤရွေ့ကားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများလှုပ်ရှားမှုများမိဘများသင့်ကျောင်းအတွက်ကြိုဆိုခံစားရကူညီစေခြင်းငှါ, သူတို့ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မရေးမအထူးသဖြင့်လျှင်. ရှမ်းအစရုပ်ရှင်ကိုခံစားခြင်းနှင့်သင့်ကျောင်းမှာရုပ်ရှင်ညမတက်ရောက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်. သငျသညျမိဘတစ်ဦးဆရာ-ညီလာခံ hosting နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့ကိုသင်လက်ဖက်ရည်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အားဖြင့်သင့်မိဘများကြိုဆိုခံစားရကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
အများစုကရှမ်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြသည်. အတော်များများကရှမ်းယောက်ျားလေးများတက်တူးများ, ဖျားနာခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါကနေတစ်ဦးချင်းစီကိုကာကွယ်ရန်ထင်ထားတဲ့. သန့်ရှင်းမှုအရှိဆုံးရှမ်းရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်.
ရိုးရာရှမ်းယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်, အမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်နှင့်သားသမီးတို့အဘို့တာဝန်ရှိသည်နေချိန်မှာယောက်ျားအများပြည်သူအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူ. အမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်အပြင်ဘက်တွင်အခြို့သောအလုပ်အတွက်စျေးကွက်မှာရောင်းသို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံစေခြင်းငှါနေစဉ်, ယောက်ျားကြီးမားသောငွေရေးကြေးရေးဆုံးဖြတ်ချက်များလုပ်လေ့. ရှမ်းယောက်ျား၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ခိုင်မာတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်. တစ်ဦးသောသူသည်မိမိဇနီးတို့ကသာလွှမ်းမိုးနေသည်လျှင်ရှမ်းယဉ်ကျေးမှုကိုတစ်ဦးစကားရှိပါသည်, သူကအကြွေးပါလိမ့်မည်.
သငျသညျမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးများရှိပါကရှမ်းကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အပေါ်ဝေမျှဖို့, အီးမေးလ်ပို့ပါ: info@usahello.org.
သင်ဤဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး print ထုတ်နိုင်ပါတယ် ရှမ်းသင်ယူသူပရိုဖိုင်းကို PDF အဖြစ်နှင့်သင့်စာသင်ခန်းထဲမှာတစ်ဦးအရင်းအမြစ်အဖြစ်စောင့်ရှောက်.